Wafdi ka socda Dowladda Somaliya oo Jubbaland Booqday – Radio Daljir
Oktoobar 13, 2015 6:39 b 0
Talaado, Oktoobar 13, 2015 (Daljir) —Wasiirka difaaca Soomaaliya Generaal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa kormeer ku tagay degmada Garbahaareey ee xarunta gobolka Gedo, halkaas oo uu kula kulmay masuuliyiinta maamulka Jubba iyo saraakiisha ciidanka XDS ee ku sugan gobolka.
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sh Ismaaciil Fartaag oo ka mid ahaa masuuliyiintii soo dhaweysay Wasiirka ayaa sheegay in ciidanka XDS ee ku sugan gobolka ay qabteen shaqo adag oo ay goobo badan ka saareen kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab, ayna mudan yihiin in loo mahad celiyo.
“Waa ciidan mudan in loo mahad celiyo, waa ciidan mudan in la abaal mariyo, waxay soo qateen shaqo badan, waligood ayayna dadka iyo dalkaba difaaci jireen” ayuu yiri Fartaag.
Wasiirka difaaca Generaal Cbadulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa hadal u jeediyay qaar ka mid ah ciidanka XDS ee howl-gallada ka wada gobolka Gedo, isagoo sheegay in dowladdu ay soo dhammaystiri doonto baahida ay qabaan.
“Maanta maalin aad ka fiican tihiin oo aad ka mustaqbal fiican tihiin ma jirto marka la barbar dhigo xaaladda aad soo marten, waxay dowladdu idiin keeni doontaa qalab iyo xuquuq dhamaystiran haduu Alle idmo, adinkana waxaa la idinka rabaa inaad sii waddaan dadalkiina” ayuu yiri Wasiir Diini.